UMthonjaneni usingathe uMkhankaso weNyus’i-Volume ka-2019 – Mthonjaneni
UMthonjaneni usingathe uMkhankaso weNyus’i-Volume ka-2019
UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela SBK Biyela ngokubambisana nomsakazo uKhozi fm, bajabulise abantu baseMthonjaneni ngokusingatha umkhankaso weNyus’ i-Volume, obese wenziwa okwesibili kulendawo ngenhloso yokujabulisa izakhamizi ngaphambi kwamaholide kaKhisimuzi e-Melmoth Indoor Sports Centre, kusukela mhlaka 12 kuya kumhlaka 15 kuZibandlela ka-2019.
Osukwini lokuqala lwalomkhankaso ngoLwesine lwangomhlaka 12 kuZibandlela kuqale kwaba nenkonzo yomkhuleko womama eyabe iholwa nguMama uDudu Khoza woKhozi fm, ngosuku olulandelayo kwaba nombuthwano wokuzivocavoca kubasebenzi boMkhandlu, amaKhansela kanye nezinye izinhlaka ezisebenzisana noMasipala, nokwalandelwa ngohambo lwamakhilomitha amahlanu lokuqwashisa ngokuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Akugcinanga lapho njengoba ngoMgqibelo kwaba nendumezulu yedili lomculo owawubanjelwe enkundleni yebhola lombhoxo edolobheni lase-Melmoth, kwase kuvalwa ngemvuselelo eyaba ngeSonto iholwa ngumsakazi woKhozi fm, uMnuz Sbu Buthelezi.
Ethula inkulumo uMeya Biyela uthe ukusingatha kwabo lomkhankaso kuyithuba eliyingqayizivele kubona lokuba bazise isizwe sonke saseNingizimu Afrika, ngemisebenzi eyenziwa nguMasipala wakhe, baphinde bathole nethuba lokuheha izivakashi kanye noSomabhizinisi abenesifiso sokutshala imali eMthonjaneni.
“Ngidlulisa ukuthokoza okukhulu kubaphathi bomsakazo uKhozi fm ngokuphinde basigixabeze ngethuba lokusingatha lomkhankaso wabo omkhulukazi weNyus’ i-Volume, ngizwile nje ukuthi umcimbi walolu hlobo uzoba lapha eMthonjaneni kuphela okuyizindaba ezimtoti kithina nabahlali baseMthonjaneni. Ukunikezwa lelithuba thina sodwa kukhomba ukuthi nabaphathi boKhozi basethembile” usho kanje. Esevala lomkhankaso uMeya Biyela uphinde wedlulisa amazwi okubonga kwaboKhozi fm, abaHoli bezepolitiki, amaKhansela, kanye namalungu omphakathi ngokukwenza lomkhankaso ube yimpumelelo.
UMeya uKhansela SBK Biyela neBamba leMenenja yoKhozi fm uNksz Sbongi Ngcobo ngesikhathi besika ikhekhe lokuvulwa ngokusemthethweni komkhankaso weNyus’ i-Volume.
UMeya SBK Biyela waseMthonjaneni, uMongameli weqembu le-IFP, uMnuz Velenkosini Hlabisa, iPhini lakhe iNkosi Mzamo Buthelezi, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, iPhini leMeya uKhansela PE Ntombela behola izinkumbi zabantu ohambweni lwamakhilomitha ayisihlanu kuqwashiswa ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane.
UbuHoli bukaMasipala kanye nabaHoli bezenkolo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yokuvula umkhankaso ngoLwesine mhlaka 12 kuZibandlela ka-2019.
UMongameli weqembu le-IFP, uMnuz Velenksini Hlabisa ngesikhathi ebingelela ubuHoli baseMthonjaneni.
Ingxenye yezinkumbi zamalungu omphakathi waseMthonjaneni ayethamele idili lomculo ngoMgqibelo eMthonjaneni.
Iqembu lomculo wokholo abaNqobi elangena esiteji kwachwaza inkundla ngesikhathi kunomkhankaso weNyus’ i-Volume eMthonjaneni.
Isilomo somculo kaMaskanda uKhuzani Mpungose okunguyena owavala inkundla ezintatha zangeSonto.
UMculi kaMaskanda ofike kwezwakala kulendima uNtencane ejabulisa abahlali baseMthonjaneni emkhankasweni weNyus’ i-Volume, eMthonjaneni.
UDkt Zuma umculi kaMaskanda wendawo eqhulula elinye lamanoni akhe kwezomculo.
UbuHoli bezepolitiki kanye nobezenkolo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yokuvala umkhankaso weNyus’ i-Volume ngeSonto mhlaka 15, kuZibandlela ka-2019.
Nyusi Volume Campaign Once Again a Success in Mthonjaneni
Mthonjaneni Municipality Welcomes All 2020 Learners Back to School